Real Madrid oo £ 150m ku dooneysa Laacib qadka dhexe ah, Halkuu ka ciyaaraa?
Wednesday, March 20th, 2019 - 16:00:49
Tuesday June 12, 2018 - 10:43:37 in Wararka by
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay 150 milyan ginni ku dalbato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic.
Madrid, oo haatan wadata inay raadiso tababare cusub ka dib markii uu ka tagay Zinedine Zidane, ayaa dhawaan sheegtay inay heystaan rikoorka seddexaad oo isku xiga Champions League, waxaana haatan la aamisan yahay inay raadinayaan inay dib u soo ceshtaan kooxdooda ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Sida laga soo xigtay wargeysyada AS , Los Blancos ayaa ka fiirsaneysa inay heshiis 150 milyan oo ginni ah kula soo wareegto ciyaaryahanka qadka dhexe Milinkovic-Savic, kaasoo hore u qirtay inuu yahay taageero u yahay Madrid.
23 jirkaan heerka caalami ee dalka Serbia ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biirayo kooxaha Manchester United iyo Juventus, lakiin waxa ay u muuqataa inay Real ku faraxsan yihiin heshiiska ay Lazio ku qaadaneyso 17 milyan oo ginni ah .
Milinkovic-Savic ayaa saftay 94 kulan wuxuuna u dhaliyay 17 gool kooxda Lazio tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Genk 2015.